Bogga ugu weyn 10ka Software ee Maareynta Lacagta ugu Wanaagsan ee la Isticmaali karo 2021
Maareynta lacagta iyo la socodka dhaqaalaha ayaa yeeshay waji kale tan iyo markii ay soo baxeen software-ka, taleefannada casriga ah, iyo internetka. Asal ahaan ma jiraan wax aad rabto in aad ku samayso dhaqaalahaaga casriga ah ama kombayutarada gaarka ah oo aadan ku fulin karin il bibiqsi gudahooda adiga oo ku faraxsan qolkaaga fadhiga.
Software-ka maamulka lacagta ayaa kaa caawin kara inaad fahanto aasaaska, wanaajiso xirfadahaaga maaraynta lacagta, iyo xitaa inaad hesho habab cusub oo aad ku gaadho yoolalkaaga maaliyadeed ee mustaqbalka fog. Software-ka maaliyadeed ee ugu wanagsan ee la isticmaalo waxaa lagu go'aamiyaa baahidaada maaliyadeed ee hadda jirta. Qaar ka mid ah software-ka maaliyadda gaarka ah ayaa kaa caawin kara Miisaaniyadda iyo dabagalka kharashka, halka kuwa kale ay kaa caawin karaan maaraynta faylalkaaga maalgashiga. Waxaa jira barnaamijyo badan iyo software kuwaas oo ku caawin kara
Maqaalkan, waxaan ku baari doonaa 10ka software ee maaraynta lacagta ugu fiican kaasoo kaa caawin doona 2021.
Waa maxay sababta aan ugu baahanahay Software Management Money?
Laga soo bilaabo rasiidhada iyo lacag-bixinta ilaa dakhliga iyo soo-saarka, software-ka maaraynta lacagta ayaa sameeya qorsheynta maaliyadeed sahlan oo fudud in la maareeyo. Rasiidhada iyo xaashida xaashida ma aha kaliya siyaabaha aad ula socon karto dhaqaalahaaga. Isticmaalka software fudud, waxaad hagaajin kartaa habka oo dhan. Diiwaanada Softiweerku inta badan waa sahlan yihiin in lagu kaydiyo oo lagu kaydiyo, ha noqoto hard drive kaaga ama adeega kaydinta daruuraha, taas oo ka dhigaysa mid yar in aad lumiso shaqadaada.
Software-ka aasaasiga ah ee maareynta lacagta ayaa si fudud u siinaya la socodka akoonnadaada, halka noocyo horu-maray ay kaa caawin karaan dhimista deynta maaraynta miisaaniyadda, iyo xitaa la-talin maaliyadeed sida adeeg gunno ah.
Kuwa soo socdaa waa 10ka software ee maaraynta lacagta ugu fiican sanadka 2021.
La taliyaha mustaqbalka
#1. DEG DEG
Waxaa la aasaasay 1983, Quicken waa mid ka mid ah barnaamijyada softiweerka maaliyadeed ee ugu caansan ee suuqa ka jira, kaasoo jiray tobanaan sano. Quicken wuu bilaabay oo si weyn buu isu beddelay ilaa markaas. Software-ka waxaa loo isticmaali karaa in lagu maareeyo waxyaabo badan oo noloshaada maaliyadeed ah, oo ay ku jiraan miisaaniyad-samaynta, deyn raadraaca, yoolalka kaydinta, iyo xataa maalgelinta tababarka. Dhoofinta Excel waxay ku jirtaa software-ka, taasoo kuu ogolaanaysa inaad beddesho oo aad samayso xisaabin dheeraad ah xogtaada.
Quicken waxaa lagu heli karaa noocyo badan oo Windows iyo Mac ah, oo ay ku jiraan Quicken Starter, Quicken Deluxe, Quicken Rental Property Manager, Quicken Premier, iyo Quicken Home & Business.
Bixinta biilasha waa mid ka mid ah awoodaha aad u horumarsan, taasoo kuu ogolaanaysa inaad lacag-bixinaha biilashaada si toos ah uga samayso software-ka. Waxa kale oo aad u isticmaali kartaa si aad ula socoto qiimaha hantidaada si aad si sax ah u xisaabiso dhammaan qiimahaaga saafiga ah. Software-ku wuxuu awood u leeyahay inuu maareeyo kharashka shakhsi ahaaneed iyo midka shirkadda labadaba, iyo sidoo kale hawlaha maareynta hantida sida ururinta lacagaha kirada ee kireystayaasha. Software-ku wuxuu diyaar u yahay Windows, MacOS, iOS, iyo Android wuxuuna ku kacayaa $35.99.
Akhri ALSO: 10ka Barnaamij ee Maaliyadda Shaqsiyeed ee ugu Fiican 2022
Mint waa mid ka mid ah barnaamijyada maaraynta kharashaadka iyo miisaaniyada aadka loo isticmaalo. Waxaad geli kartaa macluumaadka bangigaaga iyo kaarka deynta software-ka si aad u qiimeyso kharashaadkaaga oo aad u ogaato meelaha aad lacag ku kaydsan karto si aad u horumariso dhaqaalahaaga. Mint waxay kuu ogolaanaysaa inaad dejiso digniinaha waxyaabaha ay ka midka yihiin taariikhaha lacag bixinta iyo baaqyada hoose si ay kuugu sii wadaan wadadii mas'uuliyadda korodhay. Qalabkani waxa ay kaa caawinayaan in aad iska ilaaliso in aad bixiso khidmadaha sare ee lacag-bixinta soo daahday iyo xisaabaadka bangiga ee dheeraadka ah. Mint waxay ku siin doontaa macluumaadka wakhtiga dhabta ah ee ku saabsan inta aad ku bixin karto waxyaabaha sida cuntada iyo gaasta haddii aad dejisay qaybaha miisaaniyada. Barnaamijkan maaraynta lacagta wuxuu diyaar u yahay soo dejinta iyo isticmaalka IOS, Android, iyo PC.
Mint si gaar ah ayaa loo yaqaan sababtoo ah waa Bilaash, dhakhso badan, waana fududahay in la isticmaalo lana fahmo. waxa kale oo ay leedahay khibrad adeegsi oo aad u fiican, isticmaalka wanaagsan ee otomaatiga iyo sirdoonka macmal, agab miisaaniyadeed fudud, iyo ogeysiisyo waxtar leh.
#3. MAALIYADA SHAQSIGA AH
Qasnadda Shaqsiyeed waa software kuu ogolaanaya inaad ku maamusho dhammaan xisaabaadkaaga maaliyadeed hal meel. Waxaad ku dari kartaa xisaabaadka bangigaaga, amaahda amaahda, iyo koontooyinka kale ee deynta, iyo sidoo kale xisaabaadka maalgashiga, si aad u hesho sawir buuxa oo ku saabsan xaaladdaada dhaqaale. Capital Personal waxay kaa ilaalin kartaa inaad u gudubto inta u dhaxaysa shaashado kala duwan si aad u fahamto meesha aad taagan tahay haddii aad leedahay xisaabaadyo badan, sida inteenna badani maalmahan samayno. Waxaad heli kartaa la-talin maaliyadeed oo ku habboon oo ku saleysan yoolalkaaga haddii aad haysato faylal qiimihiisu ka badan yahay $100,000. Inkasta oo adeegan lagaa qaadi doono lacag, lataliyayaasha maaliyadeed waxaa laga rabaa inay ku siiyaan talo dantaada ku jirto.
Waxaad isticmaali kartaa qalabka si aad u aragto haddii hawlgabkaaga iyo ujeedooyinka kale ee maalgashiga ay ku socdaan wadada.
Capital Personal waxay diiradda saartaa raadinta maalgashiga iyo qorsheynta hawlgabka halkii ay ka ahaan lahayd qalab maaliyadeed oo shakhsi ah. In kasta oo abka uu bixiyo maaraynta wax kala iibsiga aasaasiga ah iyo miisaaniyad-samaynta, waxa diiradda lagu saarayaa qorshaynta mustaqbalka.
Marka laga reebo xaqiiqda ah in software-kani uu yahay bilaash, waxa kale oo uu leeyahay khibrad isticmaale oo aad u wanaagsan iyo dabagalka maalgashiga, shaqada qaybta smart, iyo shakhsiyaynta qorsheynta howlgabnimada.
Akhri ALSO: Raasamaalka Shaqsiyeed ma ammaan yahay & Ammaan yahay 2021 -ka? Hagaha Khabiirka ah ee maalka
Software-ka xiga ee liiskayaga ku jira 10ka software ee maaraynta lacagta ugu fiican ee la isticmaalo 2021 waa YNAB. YNAB waa erey la soo gaabiyey oo u taagan "You need a Budget." Adeegan khadka tooska ah waxa uu ku barayaa hab miisaaniyadeed oo wax ku ool ah si uu kaaga caawiyo in kharashkaaga la xakameeyo. Waxay ku salaysan tahay falsafada masuuliyad dhaqaale iyo dadaal.
YNAB waa software maaraynta lacagta shakhsi ahaaneed oo loogu talagalay inuu kaa caawiyo inaad maamusho miisaaniyadaada bilaha ah adigoo horumarinaya aqoontaada maaliyadeed. Software-ku wuxuu ka kooban yahay casharro kaa caawinaya inaad wax ka qabato qaar ka mid ah mawduucyada maaliyadeed ee aadka u adag markaad dejiso miisaaniyadaada oo aad maamusho dhaqaalahaaga maalinlaha ah. Haddii aad la dagaallantay caadooyinka maaliyadeed ee taban, YNAB waxay kaa caawin kartaa inaad jebiso iyaga oo ku bara sida loo raaco dhowr xeerar maamul maaliyadeed oo fudud.
Appku wuxuu isla markiiba ku xidhaa akoonkaaga bangiga, isaga oo ku daraya xogta kharashkaaga si loo baaro iyo dabagalka miisaaniyada. Waxa laga yaabaa in aad la socoto sida aad u socoto marka la eego ku dhegganaanta miisaaniyadaada bilaha ah oo aad tallaabo qaado haddii aad xad dhaaf tahay. Ma laha sifooyin daba-galka maalgashiga. YNAB waxay bixisaa tijaabo bilaash ah oo 34-maalmood ah si aad u tijaabiso software-ka oo aad u aragto inay ku habboon tahay ujeedooyinka maaliyadeed ee shakhsi ahaaneed. Nuqulka software-ka oo dhameystiran wuxuu ku kacayaa $11.99 bishii ama $84 sanadkii.
Akhri ALSO: Beddelka YNAB ee ugu jaban & bilaashka ah? 2021 Qaab Ganacsi oo Buuxa
Moneydance waa qalab maaliyadeed shakhsi ahaaneed oo loogu talagalay desktop-ka kaas oo taageera lacag bixinta biilka onlaynka, lacago badan, iyo cryptocurrencies. Waa interface hal daaqad ah oo si gaar ah loogu talagalay isticmaaleyaasha Mac (laakiin sidoo kale diyaar u ah Windows iyo Linux). Markaad soo rarto, waxaad heli doontaa sawir degdeg ah oo lacagtaada ah, oo ay ku jiraan qaansheegyada soo socda, kharashaadyadii dhawaa, iyo qaar kaloo badan. Markaad shay ka doorato dhinaca bidix ee bidixda, waxa ugu muhiimsan ayaa isbedelaya si ay u muujiyaan doorashadaas.
Moneydance waa dhakhso waxayna leedahay dashboard leh macluumaad badan, halkaas oo lacago badan, oo ay ku jiraan cryptocurrencies, lagu taageero. Waxa kale oo ay leedahay qalab loogu talagalay maaraynta macaamilka wax-ku-oolka ah iyo miisaaniyad-dejinta. Waxa kale oo ay awood u leedahay in ay la socoto oo ay ka warbixiso maalgelinta iyo lacagaha biilka ee internetka.
Akhri ALSO: 10 Software -ka Canshuurta Crypto ee ugu Fiican 2021
#6. LATALIYE MUSTAQBALKA
FutureAdvisor waa beddelka ugu wanaagsan haddii aad tahay maal-galiye DIY ah oo raadinaya la-taliye dhaqaale oo qiimo jaban ah. Software-ka maalgelinta ayaa soo saara talooyinka shakhsi ahaaneed si ay kaaga caawiyaan kala-duwanaanshaha faylalkaaga, taas oo aad dooran karto inaad raacdo ama iska indho-tirto. Haddii aad haysato ugu yaraan $5,000 hanti la maalgashan karo, waxaad ku biiri kartaa software-ka. Kharash sanadeedka siman oo ah 0.5 boqolkiiba hantida la maareeyay, oo rubucii biil lagu soo shubo 0.125 boqolkiiba, FutureAdvisor ayaa maamula hantida aad u soo guurto akoontiga. FutureAdvisor wuxuu isku daraa hantidaada xisaabaadka la-hawlgalayaasheeda, Fidelity ama TD Ameritrade, markaad hantidaada ku shubto akoontada.
Buxfer waa adeeg online ah oo u qabta shaqo aad u fiican oo u soo bandhigta dhaqaalahaaga si nadiif ah, xirfad leh iyada oo aan lagu daboolin saameyn iyo midabyo. Waxay ku faantaa inay hadda ka caawinayso macaamiisheeda inay maareeyaan hanti ka badan afar tirilyan dollar, taasoo muujinaysa inay leedahay saldhig isticmaale oo baaxad leh.
Waxaan jecelnahay awoodeeda miisaaniyadeed inta ugu badan - warbixinta muuqaalku waa mid aad u fiican, iyo xaqiiqda ah inaysan kugu qasbin qaybaha aasaasiga ah ee taa beddelkeeda waxay kuu ogolaaneysaa inaad kala saarto kharashyada si kastaba ha ahaatee waxaad doorataa macnaheedu waa Buxfer waa inuu si raaxo leh ugu habboon yahay hababka bangiyada ee dadka intooda badan.
Isticmaalka Mvelopes si aad u maamusho lacagtaada, habka miisaaniyadeed ee baqshadda dhaqameed ayaa kaa caawinaysa inaad ku jirto miisaaniyad. Dooro yoolalka maaliyadeed ee kuugu muhiimsan, ka dibna geli akoonnada bangigaaga iyo dakhligaaga. Mvelopes waxay kaa caawin kartaa abuurista miisaaniyad iyo habaynta "baqshadahaaga." Software-ku wuxuu ilaalinayaa kharashkaaga wuxuuna soo bandhigayaa inta aad ka bixisay baqshad kasta inta lagu jiro bisha si uu kaaga caawiyo inaad ku sii jirto bartilmaameedka.
Daabacaada ugu aasaasiga ah waxay ku kacaysaa $5.97 bishii ama $69 sanadkii, oo leh beddelaadyo qaali ah oo bixiya astaamo badan iyo umeerin. Mvelopes hadda waxay diyaar u tahay tijaabo 30 maalmood ah oo bilaash ah ka hor inta aan la go'aamin qorshaha adiga kugu habboon.
Tiller Money waxay si otomaatig ah u cusbooneysiisaa hubintaada, kaarka deynta, deynta, maalgashiga, iyo xogta akoonkaaga kale Google Sheet ama template Excel, taasoo kuu ogolaaneysa inaad ku aragto dhammaan lacagtaada hal meel. Tiller Money waxay ku siinaysaa ikhtiyaarka ah inaad isticmaasho qaabab horay loo sameeyay si aad u habayso xogtaada ama aad u habayso xaashida xisaabaadkaaga si loo daboolo baahiyahaaga gaarka ah. Waxa kale oo ay kuu soo diri doontaa iimaylo maalinle ah oo soo koobaya wax kala iibsiga iyo baaqyadaadii dhawaa. Adeeggu waa $79 sanadkii ama $6.58 bishii, laakiin waxaad ku tijaabin kartaa bilaash 30 maalmood si aad u aragto inay kugu habboon tahay iyo in kale.
Buddi waxa uu ilaaliyaa waxyaabaha sida ugu toosan ee suurtogalka ah. Waxaad ku abuuri kartaa dhammaan xisaabaadka aad u baahan tahay daqiiqado gudaheed oo waxaad bilaabi kartaa la socodka soo galitaankaaga iyo bixitaannadaada. Lacagta waxaa laga yaabaa in si sahal ah loogala baxo oo lagu wareejiyo xisaabaadka kale, Buddina waxay ku siin kartaa warbixino kala duwan oo ku saabsan kharashaadkaaga iyo dakhligaaga. Haddii aad rabto inaad lacag kaydsato, barnaamijku wuxuu kaa caawin karaa inaad ilaaliso miisaaniyada, iyo website-ka Buddi waxaa ku jira tilmaamo badan oo faa'iido leh si aad u bilowdo haddii aad gebi ahaanba ku cusub tahay fikradda xisaabinta.
Iyadoo 10-kan software ee maaliyadeed ee shakhsi ahaaneed ee cajiibka ah, maamulka lacagta 2021 ayaa hadda ka sii fiicnaanaya. Waxaad ka faa'iidaysan kartaa mid ka mid ah software-kan oo aad daawato dhaqaalahaaga oo si weyn isu beddelaya. Waxaan rajeyneynaa inaad ku riyaaqday akhrinta maqaalkan. Nasiib wacan dhaqaalahaaga!
FAQs On Software Management Money
Waa maxay Software-ka Maaliyadda Shakhsi ahaaneed?
Codsi kasta oo kaa caawinaya dhammaan qaybaha lacagtaada waxaa loo tixraacaa software-ka maaliyadda shakhsi ahaaneed. Waxaad u isticmaali kartaa codsiyo kala duwan ujeedooyin kala duwan.
Waa maxay Maareynta Lacagta?
Maareynta lacagtu waxay koobaysaa dhammaan qaybaha noloshaada maaliyadeed, laga bilaabo miisaaniyad samaynta ilaa maalgelinta ilaa kaydinta iyo dejinta yoolka.
Software-ka Maaliyadda Shakhsiyeed ma yahay fikrad wanaagsan?
Software-ka maaliyadda shakhsi ahaaneed waa mid qiimo leh haddii uu kaa caawiyo gaaritaanka ujeedooyinka maaliyadeed. Waxay kaa caawin kartaa inaad ku dhegganaato miisaaniyad iyo inaad lacag kaydsato, iyo sidoo kale maaraynta iyo dabagalka maalgashigaaga iyo helitaanka lacag.
Waa maxay Qiimaha Software-ka Maaliyadda Shakhsi ahaaneed?
Sifooyinka, shaqooyinka, iyo kharashyada software-ka maaliyadda gaarka ah waa kala duwan yihiin. Shaqada aasaasiga ah waxaa lagu soo daray labadaba daabacadaha lacag-la'aanta iyo kuwa lacagta ah ee software-ka qaarkood. Software-ka kale, kaas oo u baahan lacag bille ah, wuxuu kaa caawinayaa gaaritaanka yoolalka maaliyadeed ee kakan. Software-ka maaliyadda shakhsi ahaaneed badanaa wuxuu u dhexeeyaa $5.97 iyo $12 bishii, si kastaba ha ahaatee, waxaad lacag ku badbaadin kartaa adiga oo bixinaya sannad kasta.
Waa maxay sababta aan ugu baahanahay Software-ka Maaliyadda Shakhsi ahaaneed?
Software-ka maaliyadda shakhsi ahaaneed wuxuu u shaqeeyaa isagoo ururinaya macluumaadkaaga shakhsiyeed, ku xidhidhiyaha hay'addaada maaliyadeed, xisaabaadka maalgashiga, iyo kaararka deynta, ka dibna ku caawinaya dejinta yoolalka maaliyadeed.
10ka Barnaamij ee Maaliyadda Shaqsiyeed ee ugu Fiican 2022
13 Siyaabood oo Lacag looga Sameeyo Hantida Ma guurtada ah iyada oo aan lacag la hayn 2021
20ka Software ee Maareynta Ganacsiga ugu Fiican 2022
Iibsashada saami faa'iido leh waxay noqon kartaa lawska adag in la jabiyo gaar ahaan shirkad caalami ah sida Foxconn…
Haddii aad waligaa jabisay ama dhaawacday qalabka elektaroonigga ah ee guriga, waxaad oggolaan doontaa in…
Sida Loo Qoro Dib-u-Eegista Badeecadda Sannadka 2022-ka: Tilmaan-Tallaabo Tallaabo-fudud ah
Ogaanshaha sida loo qoro dib u eegista alaabta waa muhiim, laakiin ka hor, waa inaad ogaataa waxa ay tahay.
Dogecoin ayaa warar sameysay bilihii ugu dambeeyay sababtuna tahay soo laabashadiisa cajiibka ah. Sida qoraalkan,…
Sida Loogu Helo Lacag Bilaash ah Mercari: Hesho Dhibco Bilaash ah Maalin kasta
Weligaa ma yaabtay sababta aad ugu sii arkayso Mercari natiijooyinkaaga raadinta mar kasta oo aad wax ka baadho…
Software -ka Canshuurta ee ugu Fiican Xirfadlayaasha Canshuurta 2021 -ka
Tani waa rabitaan kasta oo diyaariyaha canshuurta - si loo isticmaalo xirfadlaha canshuurta ee ugu wanaagsan ee la heli karo…